Sawirradii dunida ugu layaabka badnaa toddobaadkan | Xaysimo
Home War Sawirradii dunida ugu layaabka badnaa toddobaadkan
Sawirradii dunida ugu layaabka badnaa toddobaadkan
Madaxweyne Donald Trump ayaa labadii bishan Diseembar shir jeraa’id ku qabtay meel banaan ah, oo Aqalka Cad agtiisa ah iyadoo weliba uu roob da’ayo ka hor inta uusan raacin diyaradda ciidamada Mariiniska ee Mareykanka.
Mudaaharaade gacanta ku haya toosh qiiq bixinaya isagoo ka qeyb qaadanayay mudaaharaad ka socday magaalada Marseille ee dalkaasi Fransiiska kaasi oo loga soo horjeeday qorsha hawlganimada ee dalkasi.
Ubaxyo qurux badan ayaa la dhigay Buundada London, kuwaasi oo loogu tacsiyeeynayo Jack Merritt iyo Saskia Jones oo lagu dilay weerarkii mindida ee 29-kii November ka dhacay Hoolka Fishmongers ee Buundada London.
Waa shaqaale ka hawl gala warshadda moobellada lagu sameeyo ee dalkaasi Uganda, kuwaasi oo isku xirxiraya Moobeellada. Warshaddan oo ah tii ugu horreysay ee laga aasaaso Uganda ayaa waxaa ay shaqeyneysay tan iyo bishii Ogosto ee sannadkan 2019-ka.
Nin da’yar oo ka mid ah dibedbaxayeyaasha dalkaasi Ciraaq oo ay kor u tuurayaan asxaabtiisa fagaaraha Taxriir kula mudaaharaadaysay.
Waa Raysal Wasaaraha Britain Boris Johnson oo taayar ka baddalaya gaawaairada loo isticmaalo tartanka xawaaraha xilli uu booqday goobtaasi.
Waa hogaamiyaha xisbiga Labour-ka UK Jeremy Corbyn oo tagay maqaaxi yar waxa uuna shaqaalaha ka caawinayaa qeybinta cuntada.